iOS 9.2.1 dia toa manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana taloha | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay, Apple dia nanangana Beta vaovao ho an'ny mpamorona: iOS 9.2.1. 24 ora taty aoriana dia nampahafantarina ampahibemaso ireo mpampiasa ireo voasoratra ao amin'ny fandaharam-pitsapana ary toa ny filazan'izy ireo fa misy fahagagana mahafinaritra ho an'ireo izay manana iPhone na iPad taloha. Toa rehefa ela ny fitarainana Apple dia mety nahatratra ny farany nampanantenainy rehefa nampiditra ny rafitra fiasa vaovao: fanatsarana ny fahombiazany rafitra amin'ny fitaovana taloha. Ka farafaharatsiny mba afaka manapa-kevitra amin'ireo video manaraka ianao.
Hatramin'ny namoahana ny iOS 9, mpampiasa maro no nitaraina fa ny fampanantenan'i Apple "hamelombelona" ireo fitaovana taloha noho ny fanatsarana ny rafitra dia tsy tanteraka. Betsaka izay nahita ny iPhone 4s sy ny iPad 2 "nandady" ara-bakiteny taorian'ny nanatsarana azy ireo ho iOS 8 diso fanantenana izy ireo nahita fa tsy namaha ny olan'izy ireo ilay kinova vaovao an'ny Apple's operating operating system. Betsaka ny fanavaozam-baovao no nandalo ary toa manatanteraka kely izay nampanantenainy i Apple, ary ny iPhones sy iPad taloha dia miasa tsara kokoa noho ny an'ny kinova taloha. Apple koa dia nahavita namaha olana vitsivitsy izay nisy fiantraikany tamin'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao aza, miaraka amina processeur matanjaka sy RAM bebe kokoa nefa misy lagy tsy azo avela toa ny Spotlight, izay tsy nanjavona raha tsy nisy fanavaozana roa.
Ny iOS 9 dia natambatra ho iray amin'ireo rafitra miasa mafy orina indrindra ary vitsy ny bibikely taorinan'ny roa taona izay nanatontosana ireo fiasa vaovao nampidirina tao amin'ny iOS. Toa nanapa-kevitra tsara i Apple fa hampihena ny fampidirana ireo asa vaovao ary hamolavola izay efa ananany, manamboatra bibikely marobe, toy ny olan'ny AirDrop eo anelanelan'ny OS X sy iOS, ary ny fanatsarana ny zava-bita. Inona no fihetsika ho raisinao amin'ny iOS 10?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » iOS 9.2.1 dia toa manatsara ny fahombiazan'ny fitaovana taloha
Dweeb dia hoy izy:
Ny tsy misy dikany amiko dia ny fomba tsy ahafahan'ny fitaovana mamindra tanteraka ny Infinity Blade na ny NOVA mamindra tetezamita izay mahazatra ny solaitrabe.
Mamaly an'i Dweeb
Elixer13 dia hoy izy:
Tena tsy mahazo aina izany; Miaraka amin'ny iPad vaovao (rivotra 2) dia mandinika imbetsaka aho raha manatsara ny 9.2. Ny ratram-po nolalovako tamin'ny iPhone 5 sy ny fanavaozana dia nahatonga ahy ho diso fanantenana. Tongava amin'ny Apple, mahita mora ny fampiasana sy ny hafainganam-pandeha, miverina amin'ny fotony: kely kokoa ny!
Valiny amin'i Elixer13
Ny fitsidihan'i Taylor Swift an'ny 1989 izao dia azo alaina, amin'ny mozika Apple ihany